SEMPAMA – NOSY Toamasina Mitokona nanomboka omaly
Mpampianatra mpanabe eto Madagasikara Miaina anaty fahasahiranana tanteraka
Efa am-polony taona maro no namoronan’ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fanabeazana sy ny siansa ary ny kolontsaina (UNESCO) ny andro maneran-tany ho an’ny mpampianatra mpanabe.
Fampianarana eto Madagasikara Tsy mifanaraka amin’ny tena zava-misy marina
Natolotra teny amin’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena tamin’ny zoma 5 oktobra lasa teo ny fehin-kevitra nivoaka nandritra ny fikaonan-doha 3 andro nataon’ny mpampianatra mivondrona ao amin’ny SEMPAMA Nosy.
Sendikan’ny Mpampianatra Malagasy Fomba fiadin’ny tompon’andraikitra ny fampisarahana
Hifarana anio etsy amin’ny INFP (Institut national De Formation Pédagogique) Mahamasina ny fikaonan-doha nasionalin’ny mpampianatra mivodrona ao amin’ny SEMPAMA Nosy.
ISFPS Leader Handefa Paramed any Angletera
Ho afaka hiasa any Angletera sy ny manodidina avokoa atsy ho atsy ireo mpampivelona sy mpitsabo mpanampy vita fianarana eto amintsika havoakan’ny sekoly ambony ISFPS Leader.
Fanadinana bakalorea 131 ireo mpiadina tsy tonga tetsy amin’ny LMA
Tafakatra 131 ny isan’ireo mpiadina tsy tonga nanatrika ny fanadinana Bakalôrea omaly alatsinainy 17 septambra tetsy amin’ny foibem-panadinana Lisea Moderna Ampefiloha, mitotaly 2.805 ireo voasoratra anarana.
Nifampitaona teo an-tokotany malalaky ny CEG Ratsimilaho ny talata maraina teo ireo mpampianatra sy mpanabe rehetra ao Toamasina, ao anatin’ny fanohanan’izy ireo ny fiantsoana fitokonana faobe nataon’ny Sempama – Nosy azy ireo amin’ny fanaovan’ny fanjakana tsinontsonina azy ireo.
Ho azy ireto dia “masina ny tanindrazana, rehefa masina ny fanabeazana ka omen-kasina ny mpampianatra sy ny mpanabe”, satria tao anatin’ny efa-taona nitakian’izy ireo ny tombontsoa keliny sy fampanantenana poak’aty atao azy ireo hatramin’izay, dia mahatsiaro ho faralahy hatrany izy ireo eo imason’ny minisiterany sy ny fanjakana misy. Mahita koa anefa ireto mpampianatra sy mpanabe ireto fa tena hanjakan’ny kolikoly sy ny akamakama ary resa-pianakaviana loatra ny minisiteran’ny fanabezam-pirenena; tsy amin’ny fanomezana tsenam-baro-panjakana ihany na amin’ny asa rehetra misy resa-bola fa hatramin’ny fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana dia tena feno, indrindra tamin’ny andiany faha-5 farany teo. Raha ny zava-nisy ao Toamasina omaly talata dia saika nanara-dia azy ireo avokoa ireo mpampianatra sy ireo mpanabe. Nisy ihany koa tratry ny tery vay manta ny talen’ny sekoly misy azy ireo ka tsy afa-nivoaka, tahaka ny teo anivon’ny EPP Todivelona Raphael Ankirihiry, La Marne Tanamakoa, l’Esperance Mangarano. Hafa kosa anefa ny antony tsy nivoahan’ireo mpampianatra sy mpanabe tao amin’ny ankaninjaza Romialo noho ity akany ara-panjakana tokana ao Toamasina ity mitaiza ireo zanaky ny sahirana.